ALHOSN University - Study na Abu Dhabi, na UAE
ALHOSN University Nkọwa
acronym : ALHOSN
tọrọ ntọala : 2005
Students (ihe ruru.) : 4000
Echefukwala atụle ALHOSN University
Idebanye aha na ALHOSN University
The ụkpụrụ nduzi nke ALHOSN University, "Global Knowledge na Obodo Vision", bụ karịrị nnọọ a slogan. Ọ bụ a nkà ihe ọmụma na a ikwere na ụkpụrụ omume nke zuru ụwa ọnụ ihe ọmụma jikọtara na obodo omenala nke na-steeped ke akụkọ ihe mere eme.
ALHOSN University envisions mmadu ibu mba dị ka a mahadum ebe niile nke ndị so na ya na-enyefe amị na-agụsị akwụkwọ na a ntọala siri ike nke ọrụ na ndụ nkà. Iji mezuo nke a, Ahụ na-ezube ike a obodo nke ndị na-amụ, ebe a learner bụ na onye e nyere ike, asian, na ọrụ.
ALHOSN University nke kwere na ọzụzụ ọkachamara na-isi maka a n'oge a obodo. Dị ka ihe alụmdi agụmakwụkwọ ka elu, ọ prides onwe ya ịbụ a kee ihe gị n'ụlọnga maka mgbanwe di iche-iche. Ọ nkwa iji mesie otu ngalaba-amụrụ mmụta obodo na-akwalite uru nke ọrụ na nnyocha na mîdaha collaborative mmụta azum na ịzụlite imekọ ihe ọnụ, utilizes Ahụmahụ mere eme, -akpata n'anya, ma na-akwadebe maka ihe ndị ihe nke n'ọma ahịa nke ga-eme n'ọdịnihu.
The University na-egosipụta ya ntinye onwe ya ozi site n'ịchụso ihe mgbaru ọsọ ndị na-esonụ:
Uto - Ịmụba na diversifying anyị ego isi-eme ka anyị nweta anyị ozi.
People - valuing ndị mmadụ na-eke a nke ọma na-eme na nzukọ. Ime ya ugbu a na programmụ na guzosie ike ọhụrụ mmemme iji n'oru, idowe, na ịzụlite kasị mma ụmụ akwụkwọ, ngalaba, na mkpara onye ga-enwe ihe dị mkpa mmetụta na ha Ọrụ na obodo.
Ọmụmụ Excellence - nweta mba ude dị ka a top onwe agụmakwụkwọ na nnyocha mahadum.
Outreach - Ịchọ ibasa ya ọrụ na obodo site na-aga n'ihu na njikọ aka nke ya Alumni na enwekwukwa mmekọrịta na obodo, oru, na ụlọ ọrụ.
Resources na Infrastructure - Secure ego - ụmụ mmadụ, ego, na akụrụngwa - mkpa ka nkwado nke ya agụmakwụkwọ na nnyocha omume na a mmụta na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi nke kasị elu na o kwere omume àgwà. Ahụ ga-amata na ihe onwunwe dị mkpa iji mejuputa ndị a mgbaru ọsọ na iji lebara na-aga n'ihu na-akpata nchegbu.
Faculty of Arts na Social Sciences
Ngalaba nke Business Administration na Management Ozi Systems
Faculty of Engineering na Applied Sciences
Ngalaba nke Architectural Engineering
Mmụta sịvịl injinịa
Ị chọrọ atụle ALHOSN University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
ALHOSN University on Map
ALHOSN University reviews
Jikọọ na-atụle nke ALHOSN University.